Abiy Axmed oo sheegay in uu Itoobiya sii hoggaamin doonto inta uu ka dhimanayo!
Wednesday June 02, 2021 - 14:01:35 in Wararka by
Kadib markii dhawaan xukuumada R/Wasaaraha Itoobiya Abiya Axmed ay ku dhawaaqday in dib loo dhigay dooraashinka wadankaasi.
Waxaa soo baxaya Caddeymo la xiriira in Abiy uusan doonayn in wadanka ay ka dhacdo doorasho ama uu wareejo korsiga uu ku fadhiyo.
Cod sir ah oo laga duubay R/wasaaraha Itoobiya islamarkaana ay baahisay warbaahinta ayuu ku sheegay in uu dhimasho ka xigo wareejinta xilka uu hayo taas oo banaanka soo dhigtay shakigii laga qabay in Itoobia ay ka dhacdo doorasho loo dhanyahay.
"Ma jirto cid awood u yeelan karta in ay dowlad soo dhisto 10-ka sano ee soo socota, geeri ayaana ka xigaa intii aan xilka wareejin lahaa" ayuu ku yiri Abiy Axmed oo hadlayay.
Codka ayaa la duubay xilli Abiy uu ka qeyb galayay shir ay yesheen xubnaha xisbiga talada Itoobiya haya ee marka magaciisa lasoo gaabiyo loo yaqaano PP.
Waxaa la maqlayay sacab is qabsaday hoolkii uu hadalka ka jeedinayay arrinkaas oo umuuqday in taageerayaashiisu ay ladhacsanyihiin kusii dheganaashiyaha xukunka.
Dhanka kale Xukuumada Addis Ababa ayaa sheegtay in codka sirta ah ee laga baahiyay R/wasaaraha uu yahay been abuur ah iyadoo ku tilmaamtay mid laysku isku keen keenay, Inkiraadaan oo ah mid aan tabar badnayn ayey dowlada Itoobiya kaga gol leedahay in ay ku damiso guuxa uu abuuray hadalka sirta ah ee laga soo dusiyay Abiy Axmed.
War kasoo baxay Xafiiska Abiy Axmed ayaa lagu yiri "Codka loo maleynayo in lagasoo duubay Ra'iisul Wasaaraha xilli uu ku sugnaa shirka xisbiga talada haya toddobaadkii lasoo dhaafay, codkaas waa mid been ah oo laisku geeyay, waxaana laga soo jar jaray codad kala duwan oo kasoo baxay Ra'iisul Wasaaraha, isbaddalo badan ayaa lagu sameeyay si looga dhigo hal cod".
Si kastaba ha ahaatee arintan ayaa kusoo aadeysa xili dhawaan Xukuumada Adis Ababa ay mar kale dib u dhigtay doorashiinkii la filayey in ay qabsoomaan, waxaana hada soo shaac baxay in Abiy uusan diyaar u aheyn wareejinta xilka uu hayo.
Mas'uuliyiin Itoobiyaan ah oo sheegay in ay xasuuq hor leh udiyaarinayaan Qowmiyadda Tigreega.
Dowladda Itoobiya oo dhaleecaysay qaabka ay Jaamacadda Carabta uga hadashay khilaafka biya xireenka.
Ciidamada Itoobiya oo qarax lagula beegsaday duleedka Beled Weyne.
2 Askari Kenyaan ah oo ku dhintay weerar ka dhacay deegaan katirsan Mandheera.
Sawirro: Waalidiinta carruurtooda laga iibsaday Eritrea oo dibad bax dhigay.